Ukuphindaphindwa kwe-GIS-Iphepha 9 -Geofumadas
Ngaphambili besithetha ngendlela yokwenza le nkqubo usebenzisa iMicrostation, kwaye nangona yayingumfanekiso okhutshelweyo kuGoogle Earth, isebenza ngokufanayo kwimephu enezinto ezichaziweyo ze-UTM. Ngoku makhe sijonge ukuba ungayenza njani inkqubo efanayo usebenzisa iManfold. 1. Ukufumana indawo yokuLawula indawo yokuLungelelanisa ubuncinci beendawo zemephu ezinezilungelelaniso ezaziwayo ezifunekayo ...
Umhlaba ka-Google GPS GIS asibonise
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise
I-Georeferencing umfanekiso weGoogleEarth
Wayekhe wathetha ngokulayisha i-orthophoto kuGoogle Earth ukuba siyayazi georeference yayo. Ngoku masizame ukubuyela umva, ukuba sinembono kuGoogleEarth, indlela yokuyikhuphela kunye nokuyikhetha. Into yokuqala kukuba, siyazi ukuba yintoni elungileyo kwaye kutheni uGoogle Earth engekho, besikhe sathetha ngayo ngaphambili. Ewe, into yokuqala kukuba ...
Ngaphambili, abo bethu basebenzise ubuchwephesha ngeeNkqubo eziManyeneyo bebeqaphele inkqubela encinci kuphuhliso lwezinto zokusebenza ngeqonga le-SQL ye-2007, ebangele isidingo esikhulu senkqubo engenakwenziwa nge-SQL "ngaphandle kwebhokisi" kwamaphepha-mvume. Ukubaluleka kwesi sihloko kungenxa yokuba ukusetyenziswa kwe-SQL ...
Blog GIS asibonise
Geospatial - GIS, GIS asibonise
ESRI Image Mapper, ukupapasha iimephu
Phakathi kwezona zisombululo zibalaseleyo zikhutshwe yi-ESRI yewebhu 2.0 yi-HTML Image mapper, enenkxaso kuzo zombini amaqonga e-9x kunye namaqonga amadala kodwa asebenzayo ama-3x. Sibonile ezinye izinto zokudlala ze-ESRI ngaphambili, ezazingazange zilunge kangako, ikakhulu kuba zazinyanzelisa ukugcina iifomathi zeWFS nezeWMS zikwimigangatho yazo.
Bentley Systems ESRI GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise
Kubonakala ngathi abazobi beemephu abangooyilo bemifanekiso emibi kuphela kodwa ikwangabanyangi abakhohlakeleyo. Kuyo yomibini le mizekelo, imeko ye-Manifold kwinguqulo yesi-7 ibonakala ngathi isebenzise ezinye ii-clipart zewindows kwaye itshintshe imibala kuphela. Into embi kukuba iTennessee Titans nayo iyenzile .. Ityala ...
I-ArcGIS ye-ESRI sesona sixhobo sithandwayo seGeographic Information Systems (GIS), emva kokuba iinguqulelo zayo zokuqala ze-ArcView 3x zazisetyenziswa kakhulu kwii-245s. Eziphindaphindeneyo, njengoko besisibiza njalo ngaphambili "Isixhobo se-GIS sama-XNUMX yeedola" liqonga elitsha, phantsi kwemodeli eyakhayo eyahlukileyo, nangona kunjalo kumsebenzisi ...
ArcView ESRI GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GIS asibonise
Esi iya kuba sisithuba sokuqala endizimisele ukuthetha ngaso ngokuphindaphindiweyo, emva phantse konyaka sidlala, ndisisebenzisa kunye nokuphuhlisa ezinye izicelo kweliqonga. Isizathu esikhokelele ekubeni ndichukumise kule ngxaki kukuba kunyaka ophelileyo, kuye kwafuneka ndenze isigqibo malunga noku kuthenga kwaye ndafumana amaphepha ambalwa apho ...
GIS asibonise umbono yam yokuqala
Geospatial - GIS, GIS asibonise, Ukuprinta kokuqala
Phambi kokuba uGoogle Earth abekhona, mhlawumbi kuphela ngabasebenzisi beenkqubo ze-GIS okanye ezinye ii-encyclopedia babenombono oyindilinga wehlabathi, oku kwatshintsha ngokupheleleyo emva kokufika kwesi sicelo ukuze kusetyenziswe phantse nawuphi na umsebenzisi we-Intanethi (Kukho uMhlaba oBonakalayo kodwa hayi ngokubhala ), yinto yokudlala enkulu kaGoogle, eyenziwe ...
Ikhasi langaphambili Page 1 ... Page 7 Page 8 Page 9